Maitiro Ekukwezva Vatengi Kune Iyo Nyama Indasitiri?
Nekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu hwevanhu, chikafu chenyama chakazove chakakosha chikamu chekudya kwevanhu. Kunze kwekupa muviri wemunhu imwe nhanho yekupisa, inopawo zvakakosha zvinovaka muviri mukukura kwevanhu nekusimudzira nekuchengetedza hutano 1. Functi ...Verenga zvimwe »
Chikafu chipi zvacho chisingaenderane nesainzi chinogona kunge chiine hutachiona hunokuvadza, mavhairasi, zvipembenene, huturu uye kusvibiswa kwemakemikari pamwe nemuviri. Inofananidzwa nemichero nemiriwo, nyama mbishi inogona kutakura zvipembenene uye mabhakitiriya, kunyanya kutakura zoonotic uye hutachiona hutachiona. Naizvozvo, pamusoro pechoosin ...Verenga zvimwe »
Kuchengetedza Uye Hutano Ruzivo Kuti Chikafu Kugadzira Indasitiri Inofanirwa Kuziva
Muindasitiri yezvikafu, inosanganisira nyama fekitori yechikafu, fekitori yemukaka, michero uye chinwiwa fekitori, kugadzirwa kwemichero nemiriwo, kugadzirwa kwemagaba, pastry, doro uye zvimwe zvinoenderana nekugadzirwa kwechikafu, kuchenesa uye kuchenesa kwemidziyo yekugadzirisa uye pombi, midziyo, mitsara yegungano. , inoshanda ...Verenga zvimwe »